कानुन मन्त्री तुम्बाहाङफेद्वारा दलका प्रमुखसँग छलफल |
कानुन मन्त्री तुम्बाहाङफेद्वारा दलका प्रमुखसँग छलफल
प्रकाशित मिति :2020-05-16 10:16:53
ललितपुर । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलका नेता, मुख्य सचेतक र प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरेकी छन् ।
सिंहदरवारस्थित मन्त्रालयमा शुक्रबार भएको छलफलमा नेताहरूले आगामी बजेट कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि केन्द्रित गर्न सु्झाव दिएका छन् । उनीहरूले सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि चालेको कदम स्वागतयोग्य भए पनि तीनै तहको समन्वयमा अझै ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का मुख्य सचेतक देव गुरुङले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आउने सम्भावना तत्कालै नदेखिएकाले व्यवस्थापनमा विशेष कदम चाल्न सुझाव दिए । उनले स्वास्थ्य तथा सञ्चार उपकरण खरिदलाई तीब्रता दिन र परीक्षण दर वृद्धि गर्न आग्रह गरे ।
खुला सीमाका कारण अझै खतराका दिन आउन सक्ने भन्दै सीमा बन्द गरेर नेपाल आउन चाहेकालाई आउने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिए ।
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्रीको सुझबुझ प्रशंसायोग्य रहेको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीको स्पिडअनुसार मन्त्रीहरूले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे । खाँडले आगामी वर्ष विकासका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न कठीन हुने भन्दै केवल कोरोना नियन्त्रणमा केन्द्रित भएर बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिए ।
राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षका नेता दीनानाथ शर्माले नेपाल आउन चाहने नेपालीलाई सहजै स्वीकार गर्दै उनीहरूलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले तत्कालिन र दीर्घकालीन रणनीति बनाएर कोरोना नियन्त्रणको काममा लाग्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईले मापदण्ड बनाएर प्रत्येक पालिकालाई कम्तिमा एक हजार क्षमताको क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका सचेतक लक्ष्मणलाल कर्ण र समाजवादी पार्टीका सचेतक उमाशंकर अरगरियाले आइसोलेसनमा रहेका कोरोना संक्रमितको खानपान र बसोबासर कष्टपूर्ण रहेको बताए । उनीहरूले राहत वितरणमा स्थानीय तहले दलीय विभेद गरेको भन्दै रोक्न माग गरे ।
सुझाव सुनिसकेपछि मन्त्री डा. तुम्बाहाङफेले राजनीतिक दलका तर्फबाट प्राप्त सुझावहरू महत्वपूर्ण रहेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् र कोरोना उच्चस्तरीय समितिमा प्रस्तुत गरिने जानकारी दिइन् ।